भोइस अफ नेपालमा जजनै रुन थालेपछि चल्यो स्टेजमा रुवाबासी , के भयो आज यस्तो ? हेरौ (भिडियो सहित) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/भोइस अफ नेपालमा जजनै रुन थालेपछि चल्यो स्टेजमा रुवाबासी , के भयो आज यस्तो ? हेरौ (भिडियो सहित)
दि भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’ को डिजिटल अडिसन सुरु भएको छ । नेपालको नम्बर एक गायन रियालिटी शोको रुपमा स्थापित भइसकेको ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’ हिमालय टेलिभिजनले उत्पादन र प्रसारण गर्दै आएको छ । नेपाली टेलिभिजन रियालिटी शोका सवैजसो रेकर्ड तोड्दै ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल–२’ले करोडौं नेपालीको मन जितेको थियो ।
६० बर्षको उमेरमा कलेज पढ्दै आमा, ११ कक्षामा पढ्ने आमाको कलेजमा पुग्दा (भिडियो हेर्नुस)
यस्तो अबस्थामा भेटियो नवजात शिशु , बच्चाको टाउको वरिपरि घुमिरहेका थिए कुकुर